Vina hiatrehana fifidianana: resy lahatra amin’ny IEM ny mpianatry ny oniversite | NewsMada
Vina hiatrehana fifidianana: resy lahatra amin’ny IEM ny mpianatry ny oniversite
Anjaran’ny mpianatry ny oniversite miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana indray. “Resy lahatra izahay fa hitondra vahaolana amin’ny fampianarana ambony ny vina IEM entin’ny kandidà Rajoelina. Hany kandidà tokana nijery sy mbola hijery ny eny amin’ny anjerimanontolo izy. Efa nambarany fa hofoanana ny Antenimierandoholona ary hanamboarana oniversite manokana ny vola amin’izany. Tanora tahaka anay ny mpanorina ny IEM ary tia tanindrazana sy manana vina mitodika amin’ny tanora”, hoy ny fikambanan’ny mpianatra ho an’ny fanovana, tamin’ny alalan’ny filohany, Rakotoarindimby Benjamin, tetsy Tsiadana ny asabotsy teo. Fotoana io namelabelarana fohy ny IEM nentin’ny ekipa mpiara-miasa amin’ny kandidà laharana faha-13 nanoloana ireo mpianatra maherin’ny 500, nahitana solontena avy amin’ny faritra 22.
Olana amin’ny fampianarana ambony
Nohenoina koa ny olana sy hetahetan’ireo mpianatra ka notanisaina tamin’izany ny hakelin’ny vatsim-pianarana sy ny fahataran’izany lava. Eo koa ny olan’ny fotodrafitrasa na ny fahasimbany sy ny tokony hanorenana “cité” vaovao ho an’ny mpianatra. Manampy izany ny hanorenana oniversite ho an’ireo any lavitra, toy ny any Fenoarivobe. Ny fahavitan’ny fianarana nefa tsy misy asa. Kely ny tambiny samihafa toy ny lafiny fiofanana. Anisan’ny olana koa ny rafitra LMD, tsy ahitana ny fepetra mifandraika amin’izany, toy ny “connexion”. Eo koa ny kolikoly miseho amin’ny endriny maro. Tokony hitodika any amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ny fiofanana satria 80%, tantsaha avokoa…
Efa ao anatin’ny vina IEM ny vahaolana…
Namaly izany ny ekipan’ny IEM ka nilaza fa hoentina amin’ny kandidà Rajoelina ireo hetahetan’ny mpianatra ireo. “Misokatra ny varavaran’ny IEM ho an’ny rehetra manana tetikasa… Hovitaintsika anatin’ny fotoana fohy ny fahataran’ny fampandrosana nandritra 50 taona mahery. Efa ao anatin’ny vinan’ny kandidà Rajoelina avokoa izany. Tanterahiny ny azy ny ambarany, toy ny efa nataony tany amin’ny faritra maro efa notsidihiny”, hoy ihany izy ireo.